mFortune Mobile Casino waa mid ka mid ah meelaha yar halkaas oo aad ku raaxaysan karaan turub mobile lacag dhabta. Waxaa jira lacag dhab ah kulan turub Texas Hold'em maalintii oo dhan iyo habeenkii oo la heli karo, oggolaanayo in aad ku biiri ciyaar mar walba oo ay adiga kugu habboon. Dabcan, Waxa kale oo aad awood u ciyaaro xiiso leh si ay u dhaqmaan aad ciyaarta ka hor inta aadan qaadan on ciyaartoyda lacagta dhabta ah.
Playing Texas Hold'em turub
The kulan turub mFortune Mobile Casino Texas Hold'em socota xeerarka caadiga ah ee turub Texas Hold'em iyo waa fiican ee qof aqoon u leh ciyaarta kuwaas oo ama kii doonaya in ay bartaan sida loo ciyaaro. Ciyaartoyda waxaa kula macaamiloodeen labo dalool oo si wadajir ah ula shantii kaararka bulshada aad u baahan doontaa inaad u samaysaa shan card fiican turub gacanta aad heli karto.
Hands darajo, ka sareeya si ay ugu hooseeya, sida soo socota: radi boqornimada, radi toosan, afar ka mid ah nooc ka mid ah, guriga ka buuxa, radi, si toos ah, 3 nooc ah, 2 lammaane, 1 Labada. Marka dhan gacmaha ayaa la ciyaaray, haddii faro ma darajayn jira, markaas kaarka badan ee ciyaaryahan kasta waxaa la barbar dhigo.
Cayaartoy ma noqon karaan kuwo fudud sida jiro button ah tallaabo kasta oo laga yaabaa in aad rabto in aad qaadato - bet, call, kicin, hubi iyo laab.
guusha ee ciyaarta waxaa lagu Abaal marin dheri oo dhan, haddii labada ciyaaryahan xerin, kaas oo kiiska dheriga loo kala qeybin doonaa si siman u dhexeeya ciyaartoyda.
Waxa kale oo jira dheri kooxda jirta ciyaarta oo tanuna waa u faa'iido badan ee ciyaaryahan oo aan dabooli karin bet ah sida iyaga oo aan haysan chips ku filan. mFortune Casino xisaabisaa size ee dheri dhinaca idiin.
Waxaa jira saddex heer oo aannu miisas ka soo xusho si aad u ciyaari karaa miiska in habboon awoodaada. Sidoo kale waxaa jira fursad u ciyaaro miisaska gaar ah la saaxiibo.